बेलबारी नगरपालिकाको बजेट ६६ करोड - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ३० पुष २०७४, आईतवार ०७:१७
Apcalis SX Oral Jelly no rx, buy clomid online. बेलबारी, ३० पुस । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको प्रथम अधिबेशनबाट चालु आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ का लागी ६६ करोड ४ लाख २ हजार २ सय २ रुपैँया ९२ पैसाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
हिजो नगरपालिकाको प्रथम नगरअबिधेशनमा उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीले प्रस्तावित बजेट र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बिनियोजन मध्ये चालुखर्च तर्फ ४० करोड ८१ लख ६ हजार ३ सय ४ रुपैया ५९ पैसा र पुँजीगत तर्फ २५ करोड २३ लाख ७५ हजार ९ सय २४ रुपैँया ३३ पैसा रहेको छ ।
चालुखर्च तर्फ प्रशासनिक खर्च ७ करोड ४३ लाख ७२ हजार ३ सय ८७ रुपैँया, कार्यक्रम खर्चतर्फ ३३ करोड ३७ लाख ३३ हजार ९ सय १७ रुपैया रहेको छ । कुल बजेटको खुद प्रशासनिक खर्च ११.२६ प्रतिशत, कार्यक्रम खर्च ५०.५३ प्रतिशत, पुजिँगत खर्चतर्फ ३८.२१ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
नगरपालिकामा रहेका ११ वटा वडाहरुमा प्रत्येक वडामा ७५ लाख सिलिङ बजेट र ५ लाख प्रशासनिक खर्च गरी ८० लाखका दरले बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
हरित नगरी नगरपालीकाको रुपमा बिकास गरिने प्रमुख लक्ष्य रहेको बेलबारी नगरपालीकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।valtrex
Cialis buy online, acquire lioresal. विराटनगर २२ पुस । इनोभेटिभ घर नेपाल र युजआर्ट नेपालको...